कस्तो रहला तपाईंको यो साता ? हेर्नुहोस, मंसिर २३ देखि २९ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल – PathivaraOnline
Home > समाचार > कस्तो रहला तपाईंको यो साता ? हेर्नुहोस, मंसिर २३ देखि २९ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल
कस्तो रहला तपाईंको यो साता ? हेर्नुहोस, मंसिर २३ देखि २९ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल
उत्कृष्ट रहनेछ । आर्थिक उन्नतिका साथै व्यवसायमा पनि वृद्धि हुनेछ । प्रेम जीवन सुखद् रहनेछ । कार्य लाभका योग देखिन्छन् । बोलीको विशेष प्रभाव रहनेछ । मित्र जनको साथ सहयोगले कार्यमा सफलता हात पर्ने देखिन्छ । सुखद् यात्राका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन् । शत्रु निर्वल रहनेछन् । धार्मिक सामाजिक कायमा रुचि जाग्नेछ । पारिवारिक साथ सहयोग प्राप्त हुनुका साथै कृषिकर्मबाट लाभ रहनेछ ।
मध्यम फलदायी रहनेछ । सोमबारसम्म स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता रहनुका साथै खर्चमा पनि वृद्धि हुने देखिन्छ । बुधबारबाट कार्यमा सफलता हात पर्ने देखिन्छ । मित्रजनको साथ सहयोगले कार्यमा उन्नति हुनेछ । पारिवारिक साथ सहयोगल मिल्नुका साथै यात्राका योग पनि देखिन्छन् । अध्ययनमा रुचि जाग्नुका साथै कला मनोरञ्जनमा रुचि जाग्नेछ । प्रेमको क्षेत्र मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ ।
अर्थकरी रहनेछ । शत्रु पराजित हुनेछन् । घर परिवारको साथ सहयोग मिल्नुका साथै कार्यमा पनि उन्नति हुने देखिन्छ । आय आर्जनका स्रोत बढ्नेछन् । कला साहित्यका क्षेत्रमा अभिरुचि रहनेछ । पदोन्नतिका अवसर पनि मिल्नेछन् । बोलीका विशेष प्रभाव रहनेछ । मित्र सहयोग मिल्ने देखिन्छ । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भने सजग रहनु नै उचित हुनेछ । मंगल र बुधबार कार्यमा अवरोधका साथै खर्चमा वृद्धि हुने देखिन्छ ।
लाभदायी रहनेछ । कार्य लाभका साथै आर्थिक उन्नतिको योग देखिन्छ । शत्रु निर्वल रहनेछन् । कार्यमा सफलता मिल्नेछ । अध्ययन अध्यापन कार्य सफल रहने छ । धार्मिक कार्यमा रुचि जाग्नुका साथै पारिववारिक सुख मिल्ने देखिन्छ । मित्र सहयोग मिल्नुका साथै प्रेम जीवन पनि सुखद् रहनेछ । सामाजिक कार्यमा रुचि जाग्नेछ । आर्थिक लाभका योग देखिन्छन् । बिहीबारबाट भने कार्यमा अवरोध रहने देखिन्छ ।
वृद्धिदायी रहनेछ । भौतिक वस्तुबाट विशेष लाभ हुनेछ । व्यापार व्यवसायमा वृद्धि हुनुका साथै सुखद् यात्राका योग पनि देखिन्छन् । अध्ययनको क्षेत्र सबल रहनेछ । कला साहित्यमा विशेष अभिरुचि रहनुका साथै यात्राका अवसर पनि मिल्ने देखिन्छ । शत्रु पराजित हुने छन् । कीर्ति वृद्धिका योग देखिन्छन् । कार्यमा सफलता मिल्नेछ । सन्तान सुख देखिन्छ । मित्र लाभका साथै कार्यमा उन्नतिको योग पनि देखिन्छ ।
मध्यम फलदायी रहनेछ । सोमबारसम्म स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता रहने देखिन्छ । शत्रु पक्ष पनि सबल रहनेछन् । सोपश्चात्को समय शुभ रहनेछ । धनको क्षेत्र सबल रहनेछ । आर्थिक उन्नतिका साथै व्यापार व्यवसायमा पनि वृद्धि हुनेछ । सामाजिक कार्यमा रुचि रहनेछ । व्यवसायमा वृद्धि हुनेछ । मित्र जनको साथ सहयोग प्राप्त हुने छ । अध्ययनमा रुचि जाग्नुका साथै सुखद् यात्राका योग पनि देखिन्छन् ।
कार्यदायी रहने देखिन्छ । आर्थिक उन्नति हुनेछ । कार्य लाभका साथै मित्र प्राप्तिको योग देखिन्छ । पारिवारिक सुख मिल्नुका साथै अध्ययनमा पनि सफलता हात पर्नेछ । पराक्रम बढ्नुका साथै सामाजिक कार्यमा रुचि जाग्ने छ । बिहीबारबाट स्वास्थ्यमा प्रतिकूलताका साथै कार्यमा अवरोध रहने देखिन्छ । शत्रु सबल रहने छन् । कार्यमा सजग रहनु नै उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
फलदायी रहनेछ । व्यवसायमा वृद्धि हुनेछ । आर्थिक उन्न्तिका साथै नयाँ लगानीको क्षेत्र खुल्नेछन् । मित्र सहयोग मिल्नेछ । अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र मध्यम फलदायी रहनेछ । प्रेम जीवन सुखद् रहनेछ । पारिवारिक सुख मिल्नुका साथै सुखद् यात्राका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन् । सामाजिक कार्यमा मन जानेछ । बिहीबारबाट कार्यमा अवरोधका साथै स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता रहने देखिन्छ ।
धनदायी रहनेछ । आय आर्जनका स्रोत बढ्नेछन् । वाणिज्य क्षेत्रमा सफलता मिल्ने देखिन्छ । कला साहित्यमा अभिरुचि रहनेछ । मित्रजनको साथ सहयोगले कार्यमा उन्नति हुने देखिन्छ । भौतिक वस्तुबाट विशेष लाभदायी रहनेछन् । सुखद् यात्राका योग पनि देखिन्छन् । प्रेममा सफलता मिल्नुका साथै घर परिवारबाट पनि विशेष लाभ रहनेछ । सता सबल र सफल रहने देखिन्छ ।
मध्यमफलदायी रहनेछ । सोमबारसम्म शारीरिक आलश्यता रहने देखिन्छ । कार्यमा अवरोधका साथै शत्रु भय हुन सक्नेछ । बोलीमा सजगता अपनाउनु नै उत्तम हुनेछ । मंगलबारबाट कार्यमा उन्नति हुँदै जानेछ । मित्र सहयोग प्राप्त हुनुका साथै कार्य लाभको योग पनि देखिन्छ । अध्ययनमा रुचि जाग्नेछ । पारिवारिक सुख मिल्नु्का साथै सुखद् यात्राका योग देखिन्छन् । धातुजन्य पदार्थबाट विशेष लाभ रहने देखिन्छ ।
अर्थकरी रहनेछ । व्यवसायमा वृद्धि हुनेछ । सामाजिक मान प्रतिष्ठा मिल्नुका साथै कार्य गर्ने उत्साह मनमा छाउनेछ । मित्र सहयोग मिल्नुका साथै अध्ययन अध्यापनका क्षेत्रमा पनि सफलता हात पर्ने देखिन्छ । कार्य लाभ हुनेछ । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भने सजग रहनु नै उत्तम हुने छ । आमदानीका स्रोत बढ्ने छन् । आर्थिक उन्नतिका साथै धार्मिक कार्यमा रुचि जाग्ने देखिन्छ । मंगल र बुधबार कार्यमा अस्थिरता रहने देखिन्छ ।
लाभदायी रहनेछ । अध्ययनमा रुचि जाग्नेछ । कार्यप्राप्तिको योग देखिन्छ । व्यापार व्यवसायमा वृद्धि हुनेछ । आर्थिक लाभका योग देखिन्छन् । धार्मिक कार्यमा रुचि जाग्नुका साथै यात्राका योग देखिन्छन् । कार्य लाभका साथै पारिवारिक साथसहयोग प्राप्त हुनेछ । शत्रु पक्ष भने सबल देखिन्छन् । बिहीबारबाट स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता रहनुका साथै खर्चमा वृद्धि हुने देखिन्छ ।
आकाश जमिनमा जहाज होल्ड, फ्लाईट रद्द, जनता सडकमै नजरबन्द आज कसको सवार छ ?
भर्खरै आयो निर्मला हत्या काण्डमा पक्राऊ परेका प्रदीपको यस्तो खबर
एनआरएनको निर्वाचन फेरि स्थगित,बाहिर हामी भेंडाबाख्रा होईनौ भन्दै यस्तो होहल्ला (भिडियो सहित)
फेरि आयो दुःखको खबर, काठमाडौमा यस्तो विष्फोट
‘मुख मैथुन’ गर्न बाध्य पारेको भन्दै मेनुकाले मारिन आफ्नै श्रीमान